Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Virgil van Dijk Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Star kasị mara aha na aha njirimara; 'Anya'. Ihe omuma anyi nke Virgil van Dijk Akụkọ ya na akwukwo ihe omuma Eziokwu na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe omuma ama site na nwata rue oge.
Nyocha nke Akụkọ Liverpool na Dutch na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya, mmekọrịta mmekọrịta ya na ọtụtụ OFF-Pitch amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-ele Virgil van Dijk Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Virgil van Dijk Nwatakiri Akuko - Nduzi na Ezin’ulo:
Virgil van Dijk mụrụ na 8th nke July 1991, na Breda, Netherlands. Ọ bụ Ọrịa site na ịmụ nwa. A mụrụ ya nna Dutch (Ray Van Dyke) na nne Surinamese (Ruby Van Dyke). Virgil dị nnọọ ka nne ya mara mma, n'adịghị ka nna ya.
Ezigbo nwa amụrụ Virgil dara mgbe ọ gbalịchara ịmalite ọrụ ya na Willem II.
E weere ya dị oke ngwa ngwa na obere. Nke a na-esote ya na-eme ụlọ ọgwụ n'ihi ụbụrụ abdominal dị ize ndụ o nwere. Ọrịa ahụ ka na-ahụ ruo mgbe ọ ga-abụ nke ọma na afọ ala ya.
Ọ dabara na ya, ọ gbakere site na nsogbu ime afọ ya na uto. Ahụ ike Virgil na uto ya mgbe ọ gbakechara bịara dị oke egwu. Nye ndị mụrụ ya, ọ bụ ọrụ ebube. Nke a hụrụ mmalite nke ọrụ ya.
Virgil gara 255 kilomita si n'obodo ya Breda na Groningen onye nyere ya oku izizi ya na football.
Mgbe ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ ọkachamara, ọ kwagara Celtic na 2013, ebe ọ meriri Scottish Premiership.
A kpọrọ ya aha na PFA Scotland Team of the Year na oge abụọ ya, na-emeri iko Scottish League na nke ikpeazụ.
Na September 2015, o sonyeere Southampton. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Virgil van Dijk Love Akụkọ:
N'ihe na-eme mmekọrịta dị ogologo oge, Virgil gara otu nwanyị nke o kwenyere na ọ ga-abụ na ọ ga-abụ onye na-ekwesịghị ntụkwasị obi nakwa onye ga-eguzo n'akụkụ ya n'ọnọdụ niile.
Virgil na enyi ya nwanyị Rike bụ otu afọ na mba (Mba netherland). Ha na-akpa kemgbe ha bụ nwata. Nke a bụ Virgil na ịhụnanya maka ndụ ya, Rike.
Rike Nooitgedagt abụrụla ihe nyeere Virgil aka ịbanye n'ime ndụ ọhụrụ site n'oge ya na Willem II.
Enweela ya maka ịhapụ ọrụ ya dị elu iji jiri ịhụnanya maka ndụ ya gaa Scotland na Britain.
Jide otu ugboro kwuru na nyochaa: "Ana m echeked dị ka onye njikwa ire ma ree ụdị ejiji dị iche iche na ụlọ ahịa na Holland.
Ahụrụ m ya n'anya mana ịhapụ ịhapụ ịgbaso nwoke m ebe ọ bụla football na-akpọrọ ya. Ruo ugbu a, anyị ejirila nkịta anyị mara mma dozie ya. ”
Rike bụzi nwanyị na - agba bọọlụ oge niile na Wag. N'oge na-adịbeghị anya, Virgil gosipụtara n'ihu ọha ịhụnanya ya n'oge ezumike ha.
O tinyere foto ya ebe o buliri onye ya na ya na-eme bikini n'ụkwụ ya wee dee, sị: "Ị bụ ịhụnanya maka ndụ m!".
N'igosipụta ịhụnanya ọzọ n'ihu ọha, Debe ya: "M hụrụ gị n'anya ọ bụghị naanị maka onye ị bụ kama maka onye m bụ mgbe m na gị nọ. "
Virgil van Dijk Biography Eziokwu - Nchịkọta Mba tupu Nwatakịrị:
Di na nwunye ahụ nwere nwa mbụ ha na 2014: nwa nwanyị Virgil na-enwe mmasị dị ukwuu dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru.
Ịmụ nwa ha bụ ihe omume. Mgbe Rike ruru na September 2014, Van Dijk, n'ikpeazụ, kpọrọ òkù a Mba Netherlands ọ chọsiri ike.
Ọzọkwa, onye na-agbachitere ahụ achọghị ịhapụ ọmụmụ nwa ya nwanyị. Ntre nso ke enye akanam?…
Virgil mere ndokwa maka enyi nwanyị ya ka ọ ghara ịmụ nwa ha. Nke a na-akatọ ndị Fans ọbụna Netherlands onye nchịkwa, Guus Hiddink bụ onye kpọrọ ya.
N'inwe nhọrọ na-enweghị isi, nemesis jidere ya. Guus Hiddink ahọpụtaghị ya maka egwuregwu a na-akpọ atụmanya atụmanya.
Virgil van Dijk Biography - atingghọ aghụghọ ule na enyi ya nwanyị:
E gosipụtara na Virgil van Dijk na-aghọ aghụghọ na Rike mgbe ọ dị ime. A gwara ya na ọ ga-enye ya ego abụọ Georgie Lyall ga-ehi ụra.
Georgie zutere Dutch ace van Dijk awa ole na ole mgbe o mere ememe Celtic na-enwe mmeri na onye òtù ọlụlụ Rike Nooitgedagt na Parkhead.
Echiche nke izute Georgie jupụtara ya n'uche ka ya na Rike na-anọkọ n'oge elekere egwuregwu ya.
Otu ihe kpughere na ndị otu ahụ nọ na kọntaktị ụbọchị ahụ tupu ndị otu Celtic jubilant jidere aka ha na ọlaọcha.
Dika nkịta Virgil na Georgie nwere ihe omuma nke a tupu ha ezute na nkwari akụ.
Foto na - esote gosipụtara nke ekpughere tupu na mgbe emechara ha, gwụchara onwe ha n'elu akwa ụlọ nkwari akụ.
Ọ bụ Georgie Lyall bụ onye kpebiri ịkpọ ya ka ọ kwụsịrị mgbe ọ kpebiri ịgbanwe ụzọ ndụ ya. Nke a mere mgbe ọ nakweere mahadum na-enye aka n'ịmụ ndị nọọsụ.
N'okwu ya: “A nabatala m ka m bụrụ nọọsụ. Nọọsụ bụ ihe m na-achọ ime mgbe niile.
M na-adaba na ụlọ ọrụ ndị okenye mgbe m bụ nwata. Anọ m n'ime ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ise - mana ewepụtara m ihe niile na sistemụ m ”
Ọ gara n'ihu… "Ugbu a tozuru etozu m n'ezie ga - ewedata isi wee nye ihe niile mụtara ịmụ, inweta nzere na ịme ihe bara uru."
Nke a na-esote site na ihichapụ akụkọ mgbasa ozi ọha mmadụ. Ọ na-ekwusi ike na o nweghị akwa ụta
banyere ya raunchy gara aga nakwa na nzukọ Virgil.
Onye Dutch mgbe e jidere ya na o zitere ya site na akaụntụ o kwuru
bụ nke enyi.
Ọ bụ ihe na-erughị izu abụọ ka e mesịrị, Rike gwara ya na ọ na-atụ anya nwa. Akụkọ ndị a na-adịbeghị anya na-ekwu na ọ bụzi onye gbanwere agbanwe.
Virgil van Dijk Bio - Ozugbo Egwuru egwu dị ka onye na-eti ihe:
Ihe oru Van Dijk bu ihe akaebe site na ntoputa ya dika ndi oka egwu. Ejiri ya dị ka onye na-egbu ihe mberede maka klọb Groningen mbụ ya.
Ọ duru ndị otu ya na 4-2 meriri ADO Den Haag na Eprel 2011.
N'oge na-adịghị anya, ọ laghachiri n'ọkwá nchebe ya dị n'etiti, ma gosipụta onwe ya ngwa ngwa dị ka otu n'ime ndị na-eto eto na-eto eto na-agba bọl na ụwa.
Virgil van Dijk Biography - Onye Na-emegide Siri Ike Ya:
Virgil van Dijk kwetara na ọ na-eche ihu Anthony Martial adighi ka egwuri egwu n'asusu ndi ozo nke Scottish.
mara nyere otu nwa agbọghọ Virgin van Dijk aka ozugbo onye na-agbachitere ahụ na-ata ahụhụ
Nke a mere mgbe onye France na-agbachitere onye na-agbachitere Dutch ka onye Manchester United merie 3-2 na St Mary. mara ọbụna nara ọmịiko na Van Dijk wee nyeere ya aka site na cramp tupu ọgwụgwụ nke egwuregwu.
Eziokwu Virgil van Dijk - Okwukwe:
Virgil bụ Onye Kraịst site n'okwukwe. Ọ na-eme ekpere pụrụ iche maka ezinụlọ, enyi nwanyị na ndị m hụrụ n'anya. Ọ bụ ezie na ọ naghị aga ụka.
N'okwu ya ...'Mgbe m dị obere, ana m aga chọọchị na Sunday ọ bụla, mgbe m mere okenye, akwụsịrị m. Ma mgbe ụfọdụ m na-ekpe ekpere ma echere m na o nyeworo m aka n'oge ụfọdụ siri ike. '
Virgil van Dijk Biography Eziokwu - Ndụ Nke Onwe:
Virgil van Dijk bụ cancer ma nwee àgwà ndị a na àgwà ya;
Ike Virgil van Dijk: Ezi uche, nke nwere ezi uche, nke nwere obi ike, nke nwere ọmịiko, nke na-eme ka obi sie gị ike.
Ike Virgil van Dijk: Mgbaghara, enweghi nchekwube, na-enyo enyo, na-enweghị isi, enweghị nchebe.
Nso Virgil van dijk amasị: Art, ihe omume ntụrụndụ nke ebe obibi, izu ike nso ma ọ bụ na mmiri, na-enyere ndị a hụrụ n'anya, ezigbo nri na ndị enyi.
Ihe Virgil van Dijk achọghị: Ndị mba ọzọ, nkatọ ọ bụla nke mama ya na-ekpughe ndụ onwe onye.
Daalụ maka ịgụAnyị Virgil van Dijk Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!